Siyavuyisela kubafana ngoFebhuwari 23 - kwivesi kunye neprose, ezihlekisayo kunye nezobucwebezela ngamagama
Okuvuyisana kakhulu kumakhwenkwe ngoFebruwari 23 kwivesi kunye neprose
Nangona iFebhuwari 23 ngokuyinhloko iholide yamadoda adibene nenkonzo yempi, "amantombazana" anelungelo lokubhiyozela eli ganeko! Emva koko konke, ukukhusela i-Fatherland akukhawulelwanga kuphela ukulinda imida yelizwe lakubo kunye nokulwa nabalutsha - abasemncinci abasoloko bekulungele ukuzikhusela kwiengozi zabo, abahlobo kunye nabahlobo, kwaye ke le yiholide yabo. Sazilungelelanisa kakhulu kubafana ngoFebruwari 23. Yonke imibongo echazwe apha kunye namagama amnandi angabhalwa ngesandla ngeposi okanye iprintwe kumshicileli.
Uvuyayo ngoFebruwari 23 amakhwenkwe kwivesi
Ukubuliswa ngabafana ngoFebruwari 23 bahlala behamba kunye neengoma ezivuyokileyo. Ukubhiyozela Usuku lwabaMvikeli be-Fatherland lwaluyolonwabo kwaye lulungile, sikulungelele ukhetho oluhle kwi-fom.
Amakhwenkwe ngoku iholide, ngamashumi amabini anesithathu, ngoFebruwari. Esikolweni, ngamnye ofunda naye, ngaphandle kwekhalenda
Ukubulisa okulindelwe Ukulungela ukususela ekuseni. Unobtrusively uyabubula: Uphi amantombazana? Buhlungu!
Ngoko izifundo ziphelile, Kungekudala baya kuvuyisana, Iingoma zokucula phantsi kweChaw karaoke Nanikeza izipho!
Sawubhala imizuzu emibini nganye. Ukuba awuzange uqagele ngokufanelekileyo, musa ukusigweba ngokuthe ngqo.
Ngomhla wamashumi amabini anesithathu kaFebruwari! Ungumfana omhle, Kwabanye abantu, Akunjalo nhlobo!
Yiba nempilo, ungaguli, Ufunde ngokugqibeleleyo! Ndiyathanda kakhulu izinto ezithandwayo ebomini bam!
Ixesha elonwabileyo, Unonwabo olukhulu, ukuhleka! Kwaye kukhangeleka, kwaye kwakhona-impumelelo!
Uthokozo lwangempela ngoFebhuwari 23 amakhwenkwe eprose
Siyavuyise abafana abanakho kuphela kwifom yeenkondlo, kodwa nakwiprose. Wathi ngamagama akhe, entliziyweni, iya kuba nefuthe elikhulu kumaqhawe amancinci, kwaye abafana baya kuba nemihlali kakhulu. Kungcono ukuthetha amagama afanayo-uyancoma ngoFebruwari 23, ngokuvakalayo, ngexesha leklasi kwiklasi okanye ekhaya kwikheyibhile enkulu kunye nosapho. Ukuvuyisana ngeprose ngokuqhelekileyo kubhengezwa ngabafundisi nabazali - kuphuma emlonyeni wabo ukuba izifiso ezinjalo ziza kuzithoba ngokunyanisekileyo kubafundi kunye noonyana. Amantombazana, ukuvuyisana neontanga zabo, kukulungele ukufunda iindinyana ezimangalisayo nezichaphazelayo. Ngezantsi iyakwathokoza ngokusemthethweni ngosuku lomkhuseli we-Fatherland kwiprose. Gcina kwiibhukimakhi zakho ukubhala ezi ntetho phambi kweeholide kwaye uzifunde ngentliziyo.
Ubomi buhlutha ngejubane elininzi, ixesha leentshukumo, abantwana bakhula. Emehlweni amakhwenkwe kukho uvuyo kunye nomdla omkhulu ebomini. Makhe avele kwimbala eqaqambileyo! Ngomhla kaFebhuwari 23, ndiyifisa ngenhliziyo yonke: vumela abafana bakhule kwaye bakhule beqina, baba ngabakhuseleli kunye namaqhawe. Hlonipha abadala, baxabise ukunyamekelwa kweentsapho kwaye ke, yonke inkwenkwana-iya kuba yindoda yangempela.
Ndiyakuvuyela ngoFebruwari 23 - iholide yamadoda! Umkhuseli - engekho umkhuseli, wakhonza-akazange akhonze, kwaye kuyisiko ukuthokoza wonke umntu. Kuba, ukuba kuyimfuneko, sonke siya kuba udonga kwaye singaphuthelwa intshaba! Ngoko ngeeholide, nawe!
Siyanihalalisela ngenhliziyo yonke, bafana, ngomhla wobaMikeli be-Fatherland. Nina nonke abaneminyaka yobudala baya kuba ngabakhuseli bamanina, oodade, iintsapho zabo, kwaye ke, i-Motherland. Sinqwenela ukuba ukhule unamandla kwaye uqine, uphumelele ngokugqibeleleyo isikolo sakho sobomi uze udale intsapho enobubele onothando, esibonakaliso esibalulekileyo somntu wokwenene. Siyakholwa ngenkalipho yakho, umnqweno wokwenza wena kunye nehlabathi ibe ngcono, ngoko-ke ungakhathazeki ukucela iingcebiso kubazalwana abadala abadala abaye bafumana iimvavanyo ezininzi.
Ndiyavuyisana nabo bonke abemi bokwenene ngosuku lwabakhuseli belizwe. Kwaye ndinqwenela ukuba wonke umntu onakho, phantsi kwesibhakabhaka esinokuthula, abelethe unyana onempilo, avume ukwakha indlu ecocekileyo, kwaye ngovuyo ukutshala intsimi yonke kufuphi naye. Kwaye ukuze ungalokothi uthathe iingalo ekukhuseleni intsapho yakho kunye nekhaya lakho. Uxolo kuwe nothando nolonwabo.
Amakhwenkwe asemgangathweni emhlabeni! Unethemba lekusasa elihle leli lizwe, siyaziqhenya ngempumelelo yakho kwaye sihlale silungele ukuxhasa ngexesha elimninzi. Siyakuvuyiswa ngoMhla woMvikeli we-Motherland kwaye sinokubulela ngenxa yesibindi sakho, esele ubonakalise ngokusemncinci. Sithembele ukuba uya kuba ngabafanelekileyo abakhuseli be-Fatherland!
Iingoma eziphambili kubafana ngoFebruwari 23
Akukho holide inokuyenza ngaphandle kweengoma. Ngaloo mihla, njengoko ngoMeyi 9 noFebruwari 23, iingoma kumxholo wezempi zihlala ziqhutywa. Ngomhla woMkhuseli we-Fatherland, sikhethele ingoma efanelekileyo kakhulu kubafana; apha uya kufumana iitekisi kungekhona kwimibutho yemikhosi, kodwa kunye neengoma malunga noyise kunye nabasolwandle. Ewe, ukuba ukusebenza kwezi ngoma kuzakufuna amanqaku, anikezelwa phantsi kwetawuni nganye.
AMANQAKU AYAWO AMAKHAYA
Amazwi kaMnu Sadovsky, umculo kaL. Afanasyev. Kwixesha elidlulileyo la maphepha amakhadi angabhalwa. Kuyo yonke indawo bafuna ukukhanya kwabamkeli babo ngaphambili. AmaHighesi awona amabini, kungekhona amathathu ... kunye nemigca yee-oda izandi. Amabhaso athola amaqhawe - iiHarma azifuneki imivuzo!
Kwiimitha ezimpunga zeArbat, Kwiintaba ezikhethiweyo zeqela zelizwe Kukho amajoni omkhosi angayikhohliwe imfazwe. Sifaka umnyango kwixesha elidlulileyo, Kukho imiqolo yee-odolo. Amabhaso athola amaqhawe - iiHarma azifuneki umvuzo.
Ukubanika abantwana babo kunye nabazukulu Kwamazwe aseMother of the fighters. Thatha kwizandla ezithembekileyo kwaye akukho namagama aduduzayo. Ngamanye amaxesha ingcwaba lingaziwa, kodwa imizila yee-oda izandi. Amabhaso athola amaqhawe - iiHarma azifuneki imivuzo!
Amazwi nguMnu Sadovsky, umculo ngu R. Boyko Ngokungaqhelekanga ukubonakala, Kwiindawo ezisemaphandleni, Kwindlela yehlathi Ngezinye amaxesha ubona iPiramidi Ngenkwenkwezi ebomvu. Chorus: Uyazi, - Imemori ephilayo. Yimi phambi kwakho! Yaye apha, kungekhona iyure, kungekhona iyure, Hayi silumkile, imfazwe iyaqhubeka! AmaRaskats "aphanga" afa phantsi, Ukususela ekuqhubhiseni umhlaba awuyikududuza, kwaye ngokunyanisekileyo ukuxhomekeka kwipiramidi, I-Bouquet ingabetha ubuxoki. Chorus Kwiindawo ezixolobileyo zaseRashiya Amadodana okulala kwakhe athembekileyo, kwaye asisoze salibala Amaqhawe afile - amasosha! Chorus
Amazwi nguMnu Sadovsky, umculo nguL. Liadova Ulwandle luqala ngomlambo omncinci. Ngaba sonke simakhwenkwe? "Sonke sihamba ngomkhombe!" Ukulungiselela ukukhula, Beskozirki nabekren. Siya kubhukuda imihla ngemihla. Chorus: Siphupha ulwandle, Siphupha iLwandle, iIphuko, Njengeenkwenkwezi ezinqabileyo! Siyavuya ukufumana iVakhtas kwimfesane yemikhosi, Ukupenda umgangatho njengomgangatho, ukudansa "i-Apple". Siphuma kwiinqanaba, Bonke abajikelezileyo bajonge, Ababonisi bamanxweme ba bonisa abafana. Ama-Chorus Anchors kwietrbhoni Emva koko, Siza kubuya kusihlwa, Silinde ekhaya. Ukulala, i-capers, Ezayo ukuya kuthi kusasa, Kwaye kwintambama ekubhukubheni Yiyithuba lethu. Chorus
Amagama nguMnuz Tanich, umculo nguVs. Shainsky. Zingaki iingoma wena no-S Sung kumama kanina, Kwaye malunga nopapa ngaphambi kwesi ngoma Akukho nto ingoma enye! Ubawo unako, Ubawo unako nantoni na, Bhukuda ngesifuba, uphikisane ne-bass, Cut cut wood! U-Papa unako, utata unokuba nantoni na, Umama kuphela, umama kuphela Akakwazi ukuba! Umama kuphela, umama kuphela. Akunakuba! Utata endlwini - kwaye indlu iyasebenza, igesi iyatshisa kwaye ukukhanya akupheli. Ubawo endlwini, ngokuqinisekileyo, eyona nto, Ukuba umama engozini! Yaye kunye nobunzima uYise ngokwakhe uya kuhlangabezana nayo - banike ixesha! Emva koko senza isigqibo kunye nomama Konke uPapa akakwazanga ukuyisombulula!
Ndiyakuvuyela abafana ukusuka ngoFebruwari 23 kwivesi ngegama
Siyavuyisela ngamagama oza kuwafumana ngaphantsi kwesi siqendu - senze ukhetho lweevesi ezincinci zithandwa kakhulu. Bongeza ngesibindi kwiingxelo zezinye iindinyana, ukuba awufumani kwimiyalezo yegama.
UAlexander Igama lakho lithetha ukuthi, ukuba ungumkhuseli wabantu, Ewe, wonke umntu uyazi - Akukho msebenzi ubaluleke kakhulu. Ukukhusela ilizwe kunye nabemi, uKohl uza kuza, ufuna ukuba ngumntu, wonke umntu, oku akunjalo. UAlexandro, uyathokoza Ngomhla we-23 kaFebhuwari, Unesibindi, ndiyazi, Awukwazi ukunqotshwa! USergey Uluhlu oluhle, ngoFebruwari Usukuvuyisana, Makungabikho iingxaki, iintsilelo - Sinqwenela uvuyo lwezinto ezinkulu!
Sergei, vumela umoya ufudumale, kwaye naphi na apho uhlala khona, soloko ukhanyisa ukhanyiso lwakho olukhanyayo. Ilya: Mhlobo othandekayo, Ilya, Ukususela ngoFebruwari 23! Jabule kwaye uphilile, Masithemba kunye kwakhona
Ukuba njengengqiqo, isibindi, Uhlobo, ukhaliphi kunye nolwazi Ukuvumela amaphupha azaliseke, Kholwa - uya kuvuya! UYuri: Ngomhla kaFebruwari, i-snowy-ilukhuni, Usuku lwabaMvikeli-Amadoda. Makhe ndikuvuyise, Yuri, Niphakamise i-glass-chin-chin!
Kwaye unqwenela ukuba ufuna impilo eqinileyo, ukufudumala Impumelelo kuyo yonke imisebenzi, Ukuphila kwakonwabile! UDmitry Dai, ndiyakuvuyisana nawe, Dima, NgoFebruwari 23, kufuneka ndithi, "Kubaluleke kangakanani kum." Unokwethenjelwa, unamandla, unesibindi, Kuba ndihlala kushushu, Kuwe nawuphi na umcimbi, Ndoda yam, iqhawe lam! UConstantine Uyakuhalalisela, uKonstantin, Ukususela ngoFebruwari 23, Abantu bethu abanakunqandwa - Njengomntu wonke, ndiqinisekile. Kungenxa yokuba kukho abantu abanjalo, ukuba banike ubugorha kunye nodumo kwilizwe. Kwaye, ke, siya kuthi, Ukuba kuyimfuneko, sikhusele, Sifuna ngokwenene iMlandland, Singaziqondi njani oku?
UDenis Kwiphepha lekhalenda - ngoFebruwari 23, eli phepha libaluleke kakhulu, Ngoko ke, ngeholide, uDenis. Ungumntu ubuncinane apho, Ndikhusele rhoqo, Emva kwakho, ngathi emva kwodonga, Iqhawe lam kuphela!
Ukunconywa ngoFebruwari 23 amakhwenkwe
Kwaye, ke, imibuliso yama-comic ifanele ibe yinto ephilileyo kuyo yonke imibhiyozo! Ngezantsi sinika imibongo enobuliso, kwaye ngokuqinisekileyo uya kuvuya bonke abafana kunye namantombazana!
Ngubani oqhuba iloli? Mntu! Ngubani ojika amanqatha kwigaraji? Mntu! Ngubani oye wangena kwindawo yokuqala? Mntu! Ngubani ohlala kwilizwe? Mntu!
Wonke umntu uyaqonda oko kubamanyanisa. Bangabantu, kwaye siyabathanda. Sinemashumi mabini anantathu, ngoko, uyazi, kukuhle ukuxabisa, xabisa intliziyo yothandekayo. Bantombazana abathandekayo! Ndiyakuvuyela entliziyweni. Wena ngabakhuseli, ndiyazi, Nangona a bantwana. Uya kukhula, ngokungathandabuzekiyo. Kwaye, esikhundleni sakhe, ngokuqinisekileyo, ihlombe lakhe elinamandla. Okwangoku, nwabisa, bantwana. Uphumla ngaphandle kokukhathazeka. Ixesha lokukhusela iRashiya kamva kamva. Siyavuyiswa kubafana ngoFebhuwari 23 yindlela enhle yokwandisa ukuzithemba kwabakhuseli bethu abancinci kwaye sibanike isibindi nesimo. Ukhuseli Ovuyayo we-Fatherland!
Izifo zendlela yokuphefumula ephezulu kubantwana
Fairy Fairy. Indlela yokukhuthaza umntwana ukuba anakekele amazinyo
Kwesihloko esikolweni: ukukhuthaza umntwana ukuba afunde kakuhle
Yenza umntwana uphumelele
I-pie enee-chanterelles kunye namazambane
Ungayi kuba njani imbobo eyi-grey uze udibanise kwintembelo kunye nekhontrakthi
Iimpawu zentloko ezinokwenza imfashini, iAntumndi-iHlabathi 2016-2017: ifoto yezona zinto ezincinci ezinqabileyo kunye neenyawo ezininzi ze-2016
IiVithamini kubafazi abakhulelweyo
Indlela yokuchonga umlingiswa womntu ngomhla wokuzalwa: Ifomula kunye nokuchithwa kwimibuzo kwi-numerology
Isikolo sexesha: i-cell-autumn trend-2016
Kulula kangakanani ukusinda umtshato
Iimpawu zobomi besondo boomama ozayo
Ukulungiswa okungekho kokusebenza kwempumlo
Isobho lokutya kunye nekhukhamba
Ikhekhe lesilikidi le-tsokolate
Indlela yokuhlamba ilineni yelitini evela kwi-satin
Ukuhleba okanye "abangabhubhiyo" abafazi "" umdlalo "